Jiri ekele kelee kwa ụbọchị. - Amaghi ama - Quedia Pedia
Jiri obi ekele bido kwa ubochi nke ahụ ga-emecha mee ka mmụọ gị dị elu ka i wee lekwasị anya n’ọrụ gị.
Ọtụtụ mgbe, anyị na-eme mkpesa banyere adịghị mma n'akụkụ anyị, nke mere na anyị enweghị ndidi iji lelee ihe ọma dị anyị gburugburu. O di nkpa iji obi uto na ubochi nile dika nke ahu g’enyere gi aka ime ihe oma n’ime ndu anyi.
I kwesiri inwe obi ekele nye onye obula tinyeworo aka na ndu gi, buru kwa onye obi uto mgbe nile. Nke a ga - eme ka ị jupụta n'ọfụma, ị ga - enwe nchekwube n'ihe niile gbara gị gburugburu.
Mara na ndị nwere nlezianya na-ejikarị ndụ ha na-eme mkpesa banyere ihe na ọnọdụ, ịkwesighi ịbụ ụdị onye na-eme nke ahụ! Bụrụ onye na-eji ekele ebido ụbọchị niile, ma mgbe ị mere nke a, ị ga -enwe afọ ojuju n’ime onwe gị.
Mara na ụbọchị ọ bụla na ndụ gị na-enye gị ohere igosipụta onwe gị. I kwesiri ilekwasị anya mgbe niile ma kpebisie ike ime ka ihe ga-abara gị uru. Nani ihe ichoro bu inwe okwukwe na onwe gi, ka olile anya abata.
Nwee ndidi ma lelee ihe gbara gị gburugburu, ị ga-achọpụta na ụbọchị nke ọ bụla na-emepe ụzọ maka gị.
Mara na ụbọchị ọ bụla bụ ohere iji gosipụta onwe gị ọzọ. Echefula nhọrọ, gbalịa inye ihe kachasị mma, ihe ndị ọzọ ga-adaba n'ebe niile naanị ha.
Ọ dị mkpa inwe obi ekele dịka nke ahụ ga - enyere gị aka ile ihe ndị gbara gị gburugburu anya. Gbalịa nyochaa nhọrọ dịịrị gị, gaa ma soro ndị mmadụ na-emekọrịta ihe, ị ga-amata na ụwa a bụ nnukwu ebe ị ga-agagharị, ma kwalite onwe gị kwa ụbọchị.
Bido ụbọchị ọ bụla na ọkwa dị mma. Ọ bụrụ na ụnyaahụ arụghị ọrụ nke ọma gị, gbaa mbọ hụ na ị naghị etinye oge ugbu a n’emeghị ihe ọ bụla ma kwaa ụta. Nke ahụ agaghị imere gị ihe ọma.
Shouldkwesịrị ịdị njikere ịnagide ihe ịma aka mgbe niile, ma jide n'aka na nsogbu ndị a niile ga-agbakwunye na ụyọkọ ahụmịhe gị nke ga-enyere gị aka ịme nke ọma na ogologo ndụ gị.
Mgbe ị na-enwe ekele n’ebe ndị ọzọ nọ, ị naghị ebu iwe n’obi gị ma nke a, na-enyere gị aka ịme nke ọma n’ọdịnihu gị.
Jiri obi ekele bido kwa ubochi i g dome kwa ezi ihe na ndu-gi. Will ga-enwe ike itolite ma ị ga - enwe ike iwere nkuzi site na ahụmịhe gị ka ha na - agbakwụnye ọnọdụ ọ bụla ị na - aga izute.
Omume Nke Ekele Quotes
Kwa ụbọchị Quotes
Kwa ụtụtụ na-ekwu okwu ọ bụla
Kwa ubochi na okwu
Nkwupụta ndị mezuru
Ekele Quotresị na Afọ Ojuju
Ekele Quot na okwu
Ekele Quotes Maka umuaka
Egosipụta Quot Images
Ihunanya na Ekele
Quotọ Morning Mọnde
Short Quot anwụ Tọsde
Ekele diri ihe nile Quotes
Chineke hụrụ gị n'anya karịa n'otu oge karịa onye ọ bụla nwere ike na ndụ gị. - Amaghi ama
Ekwuru ya nke ọma na onweghi ihe ga - agbanwe dochi anya ngọzi nke Chukwu. Chineke hụrụ gị n'anya karịa na…
Echegbula. Chineke nọ n’oge. Tụkwasịnụ ya obi. - Amaghi ama
Ọ bụrụ na ị nwere okwukwe na Chineke, ị gaghị achọ ichegbu onwe gị ọzọ n'ihi na Chineke na-aga mgbe niile…
Achọrọ m ịnọdụ ala n'akụkụ osimiri ma chefuo ihe niile maka obere oge. - Amaghi ama
Achọrọ m ịnọdụ n'akụkụ osimiri n'akụkụ niile oke nke ndụ anyị, yabụ…
Rịọ mgbaghara apụtaghị ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe na-ewute gị. - Amaghi ama
“Ndo” bụ obere okwu nke ndị mmadụ achọghị ịma na ọ bụrụgodị na ha emeela…